Shiinaha warshadleyda lamaanaha degdega ah iyo soosaarayaasha | ZAILI
Biraha ayaa lagu rakibay taksiga, biinanka badbaadada waxaa lagu rakibi karaa adigoo si fudud u riixaya badhanka badhanka gaariga. Sidaa darteed, dhibaatada ka bixitaanka taksiga waa la badbaadiyey. Tikniyoolajiyadda cusub ee furitaanka iyo xiritaanka biinanka badbaadada waxaa lagu gaaraa iyadoo la adeegsanayo nidaamka wadista korantada ee qodista, halkii laga isticmaali lahaa nidaamka hidda-shidaalka. Sidaa darteed, cadaadiska saliidda ee qaaliga ah waxaa lagu beddelay koronto, taas oo keydineysa kharashyada wax soo saarka. Taksiga dhexdiisa, dhawaaqa otomatiga ee hoonka ayaa loo isticmaali karaa si loo go'aamiyo inuu ku xirmay iyo in kale. Xaaladda silig jaban, amniga beddelaadda gacanta ayaa la xaqiijin karaa.
1, Naqshadaynta isdhexgalka waxqabadka: iyadoo la adeegsanayo bir sare oo manganis ah iyo qaabdhismeedka qaabeynta qaabdhismeedka, waara oo ku haboon shuruudaha isku imaatinka ee qodayaasha qodobo kala duwan.
2, Nidaamka badbaadada otomaatiga ah ee tooska ah: Badeecad koronto ayaa lagu rakibay taksiga si loogu beddelo cadaadiska saliidda ee qaaliga ah koronto, taas oo ku habboon darawalka inuu shaqeeyo.
3, Qalabka koontaroolka koontaroolka korontada iyo qalabka badbaadinta farsamada ayaa lagu rakibay silsilad kasta oo saliid ah si loo hubiyo in isku xiraha degdegga ah uu si caadi ah u shaqeyn karo marka wareegga saliidda iyo wareegga la gooyo.
4, Xidhiidhiye kasta oo deg deg ah waxaa lagu qalabeeyaa nidaamka ilaalinta biinanka badbaadada si loo hubiyo in isku xiraha dhaqsiyaha badan uu si caadi ah u shaqeyn karo haddii ay dhacdo in cilladda isku xirta degdegga ah ay dhacdo oo ay ka ciyaarto doorka "caymiska labalaabka ah"
5, Kala duwanaansho iyo kala duwanaansho
Kala duwanaanta naqshadeynta isku xiraha waxay xaqiijineysaa in isla isku xiraha loo adeegsan karo noocyo badan oo qotodheer oo isku mid ah. Isla mar ahaantaana, isku xirnaanta isku xiraha ayaa sidoo kale xaqiijineysa xiriiro kala duwan oo ay ka mid yihiin qabashada, rippers, iwm.
Nidaam nabadgelyo buuxda oo otomaatig ah
Hore: Roodhida Hammer
Excavator Degdega ah
Nooca Hug Haydarooliga
Coupler Haydarooliga Multi
Coupler degdeg ah Haydarooliga
Nooca Riix Haydarooliga Coupler
Nooca Aamusnaanta ee Jabiyaha, Qulqulka Qashinka, Shear For Excavator, Hb Jebiyaha Taxanaha, Burburin Waayo, Excavator, Xakamee Walxaha Wixii Jabiyaha,